ရောင်းရန်ရောစပ်စက်ကိုအစာကျွေး,မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူဖဲကြိုး Blender စက်
စွမ်းရည်:2000~ 300kg / h
ဖဲကြိုးကျွေးသောအရောနှောစက်သည်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များကိုရောစပ်ရန်အတွက်ထိရောက်။ စွယ်စုံရောစပ်နိုင်သောစက်ဖြစ်သည် & တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမှုန်. ဖဲကြိုး blender စက်၏အဓိကအသုံးချမှုတစ်ခုမှာအစာအဟာရနှင့်အတူအမှုန့်များနှင့်အခြားအာဟာရများကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်. အဆိုပါရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, သငျသညျစပါးကိုအမှုန့်အခြားအရည် add နိုင်ပါတယ်, အောင်အောင်မြင်မြင် လုံးလေးများကျွေးပါ ပိုပြီးအာဟာရ. feed ဖဲကြိုးရောနှောစက်သည်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အစာရောနှောခြင်းကိုကြိုတင်စီမံခြင်းအတွက်ကောင်းစွာသင့်တော်သည်, ကြက်နှင့်ငါးအစာတောင့် . အဆိုပါဖဲကြိုးရောနှောလည်းဓာတုထုတ်ကုန်ရောစပ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ, ထို့အပြင်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်, etc.The ဖဲကြိုးအလျားလိုက် feed blender စက်၏ပစ္စည်းသံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိနိုင်ပါတယ် . ဒီအရောအနှောရောစပ်စက်တွင်ကွန်တိန်နာပါရှိသည်, helix ဓါးသွားနှင့်ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ. အဆိုပါ helix ဓါးသွားနှစ်ခုအလွှာ၌ရှိကြ၏. အပြင်ဘက် helix သည်၎င်းကိုနှစ်ဖက်စလုံး မှနေ၍ ဗဟိုသို့ရွှေ့သွားလိမ့်မည်, အတွင်း helix နှစ်ခုနှစ်ဖက်မှပစ္စည်းလွှဲပြောင်းလိမ့်မယ်နေစဉ်,convection ရောစပ်ဖျော်ဖြေ. ကျွနုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အစာကျွေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် ပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးကြိတ်, ကျနော်တို့ပစ္စည်းများကိုရောနှောရန်အစာကျွေးခြင်းရောစပ်စက်ကိုအသုံးပြုရန်ရှိသည်.
1. အမျိုးမျိုးသောစပါးအမှုန့်များကိုရောနှောရာတွင်အာဟာရရှိသောအစာတောင့်များပြုလုပ်သည်, အထူးသဖြင့်ငါးများအတွက်, ပုစွန်နှင့်အခြား ရေနေအစာကျွေးလုံးလေးများ.
2. ဤအစာကျွေးဖဲကြိုးရောနှောမြင့်မားတဲ့ထိရောက်မှုနှင့်အတူ featured ဖြစ်ပါတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အသေးစားမြေယာထေို, သေးငယ်တဲ့အလုပ်ရုံနှင့်အတူအစာစားတောင့်စက်ရုံအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှု.
3. ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော double-direction rotating ဘီးများသည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရောစပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေသည်, CV≤7％.
4. ပစ္စည်းများအားလုံးအသုတ်အဘို့အတိုရောစပ်အချိန်. 3-6 500-4000kg အစာကျွေးမှုန့်အဘို့အမိနစ်.
7. ချောမွေ့သောဂီယာနှင့်အနိမ့် wear. သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်သုံးပစ္စည်းများ: အစွန်းခံသံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိနှင့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း.
8. ရောနှောခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှုန့်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်သိပ်သည်းဆကလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိပါ. အဆိုပါဖဲကြိုးရောနှောလည်း viscous ပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သည်.
Feed Pellet Plants တွင်အဘယ်ကြောင့်ဖဲကြိုးအစာရောနှောခြင်းရောနှောစက်ကိုရွေးချယ်ပါသနည်း
1. ဖဲကြိုးကျွေးသော blender စက်သည်အမှုန့်များအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောရောစပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည် & အရည်, granule ထုတ်ကုန်များနှင့်အမျှင်, အထူးသဖြင့်စပါးကိုအမှုန့်ရောစပ်ဘို့.
2. ဓာတ်မတည့်သည့်ပစ္စည်းများကိုပြုပြင်သည့်အခါဤအစာရောနှောနေသောစက်သည်အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်ဖိအားဖြင့်ကျွေးမွေးခြင်းရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ရောစပ်နေစဉ်ဘောဇဉ်အမှုန့်များ၏အာဟာရသည်ပျက်စီးမည်မဟုတ်ပါ.
3. ကွဲပြားခြားနားသောအချိုးအစားနှင့် granule အရွယ်အစားနှင့်အတူပစ္စည်းများသည်, ဒီ အစာကျွေးစက် ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကြမ်းများအစာကျွေးပစ္စည်းရောနှော၏လိုအပ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံသောတင်သောရလဒ်များကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
5. convective စောင်ရေထိရောက်သောနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရောစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာ.
6. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ရှုထောင့်ငါးခုသည်တိရိစ္ဆာန်အစာရောနှောခြင်းစံနှုန်းများကိုလုံး ၀ အတည်ပြုသည်. ဒီတော့ Amisy ဖဲကြိုး blender သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော feed ရောနှောစက်ဖြစ်သည် လုံးလေးများထုတ်လုပ်မှု, အထူးသဖြင့်ငါးများအတွက်, ပုဇွန်နှင့်အခြားရေနေအစာတောင့်များ.
ဖဲကြိုးအစာကျွေး Blender စက်၏သတ်မှတ်ချက်